माओवादी केन्द्र विघटन गर्ने प्रचण्डण्को घोषणा, के हुन्छ अब ? — Imandarmedia.com
माओवादी केन्द्र विघटन गर्ने प्रचण्डण्को घोषणा, के हुन्छ अब ?
काठमाडौ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा माओवादी केन्द्र विघटन गर्ने घोषणा गरेका छन् । जनताको पक्षमा काम नगर्ने हो भने पार्टी विघटन गरिदिने चेतावनी सहित यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
जनताको पक्षमा काम नगर्ने पार्टीको अब कुनै अर्थ नभएको उनको भनाई छ । आज शुक्रबार माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश समितिको प्रशिक्षणमा बोल्दै प्रचण्डले जनताको लागि काम नगर्ने हो भने पार्टी विघटन गरे हुने बताएका हुन् ।
वर्गीय पक्षधरता र क्रान्तिकारी संस्कृति भएन भने र उत्पीडित जनताको पक्षमा काम गरिएन भने पार्टीको काम नहुने उनको भनाई छ। नेता–कार्यकर्ताहरु जनतामा फर्किनु पर्ने बताउँदै उनले यस्तो गरेमा मात्र पार्टी बन्ने र समाजवादको बाटो कोरिने उनले बताए ।
प्रशिक्षण भेलामा जिल्ला अध्यक्षहरुले रिपोर्टिङ गरेका छन् । केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय कार्यान्वयनकै सिलसिलामा यी बैठकहरु भइरहेका हुन् । यसअघि केन्द्रले कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको प्रशिक्षण गरिसकेको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले यसअघि पनि जनसरोकारका मुद्दालाई पार्टीले नसमाउने हो भने पार्टी विघटन गरेर किताव लेख्दै बस्दा हुने बताइसकेका छन् ।
यसै गरि , नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू निकै खुशी भएको बताएका छन् । पार्टीको १४ औँ महाधिवेशन सुरु भएको सन्दर्भमा आफू निकै खुशी भएको बताएका हुन् ।
महाधिवेशन सुरु भएको उपलक्ष्यमा जारी गरेको भिडियो संदेशमा उनले खुशी व्यक्त गरेका हुन् । उनले सर्वसम्मत वा स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा मार्फत अधिवेशनमा सहभागी हुन अनुरोध गरेका छन् ।
पार्टीको वडा अधिवेशन सुरु भएको अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले स्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पार्टीको समग्र सङ्गठनको जग मजबुत बनाउने बताए । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नेपाली काँग्रेसलाई बलियो बनाउन जरुरी रहको देउवाको भनाइ छ ।
‘नेपाली जनताले बुझिसकेका छन्, बलियो काँग्रेसबाट मात्रै समग्र देशको विकास सम्भव छ । त्यसैले ‘बलियो काँग्रेस, समृद्ध देश’ भन्ने नारालाई साकार पार्न म पार्टीका हरेक तहका साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु,’ देउवाद्वारा जारी शुभकामना सन्देशमा उल्लेख छ ।
आफूले सबै सदस्यहरू र नेतृत्वको जोश, जाँगर र साथको अनुभूति गरिरहेको देउवाले बताए । उनले भने, ‘आज म निकै खुसी छु । ८ लाखभन्दा बढी नेपाली काँग्रेसका क्रियाशील सदस्य आजदेखि १४ औ महाधिवेशनको प्रक्रियामा सहभागी हुनु भएको छ र मैले ती सबै सदस्यहरू र नेतृत्वको जोश, जाँगर र साथको अनुभूति यतिबेला गरिरहेको छु ।’
हरेक गाउँको मुद्दासँग आफूलाई गाँस्दै, हरेक टोलको भावनाको नेतृत्व गरी बलियो बनाउन काँग्रेस जरुरी रहेको सन्देश हरेक घर–घरमा पुर्याउनु हुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु,’ देउवाले भने । संवैधानिक बाध्यता अनुसार कोरोना महामारीकै बीच महाधिवेशन सुरु गर्नु परेको भन्दै सामाजिक दूरी कायम गरी सहभागी कार्यकर्तालाई देउवाको अनुरोध छ ।
यसै गरि , नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई अर्को झट्का दिएका छन् । आफूलाई भेट्न गएका नेपाललाई निरास बनाएर पठाएका छन् ।
नेपालसँगको भेटमा जनताको बहुदलीय जनवाद जबज लाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्नुपर्ने, संघीयता परिमार्जन गर्नुपर्ने लगायतका चार सर्त राखेपछि झट्का लागेको छ । जवज छोडेर नयाँ सिद्धान्त बनाउन खोजेका नेपाललाई जवजले तनाव दिएको छ ।
गौतमले एकीकृत समाजवादीले जनताको बहुदलीय जनवाद ९जबज० लाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्नुपर्ने सर्त राखेका छन् । जबज छोडेर एकीकृत समाजवादीमा लाग्न नसकिने गौतमको भनाइ थियो । जबजलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेपछि एकीकृत समाजवादीको एजेण्डा कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने गौतमले अध्यक्ष नेपालसँग सर्त राखेका छन् ।
बामदेवका ४ सर्तले नेकपा एमालेमा खुशीयाली छाएको छ । बामदेवका सर्त नेपालले नमान्ने लगभग पक्का जस्तै छ । त्यही भएर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि खुशीले गदगद् भएका छन् ।